Ithegi: ukuthengisa okusekwe kwiakhawunti | Martech Zone
Ithegi: ukuthengisa okusekwe kwiakhawunti
NgoLwesithathu, Meyi 8, 2019 NgoMvulo, Meyi 6, 2019 Douglas Karr
Ukuthengwa kwe-B2B kutshintshile-abathengi banamhlanje abaziwa, bahlulelene kwaye bayamelana. Imizamo yokuthengisa kunye neNtengiso ye-B2B iyaqhubeka ukuba ncinci kwaye ayisebenzi kangako njengoko amaqela avelisa ingeniso esilwela ukuhlala uncipha kwengqwalaselo kubathengi kunye nethemba kwindawo esele igcwele kwaye inengxolo eninzi. Ukukhuphisana nokuphumelela namhlanje, amaqela eengeniso ze-B2B kufuneka aguqule indlela yabo ukulungiselela iimfuno zabathengi be-B2B banamhlanje. Kwi-B2B yanamhlanje yokuthenga indawo, abathengi zezi:
NgoMvulo, Agasti 20, 2018 NgoLwesibini, Agasti 21, 2018 Douglas Karr
Ndinyuke eToronto ndisiya kwinkomfa yamava eUberflip. Namhlanje, sichitha usuku kwikomkhulu elihle lase-Uberflip kwaye simamele ezinye zezona zithethi zibalaseleyo. Iseshoni enye ebinempembelelo kum ibinguMlawuli weABM weQhwa, uDaniel G. Day, ethetha ngendlela ayiphuhlise ngayo inkqubo yeABM ethi inyuse iziphumo zentengiso zeSnowflake. @uberfliphq icandelo lokuphuphuma le #CONEX liyaxhuma! Intle iHQ apha kwi #Toronto #torontotech Isithuba ekwabelwana ngaso ngu Douglas Karr (@kwanele)
NgoLwesine, uJanuwari 25, 2018 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 26, 2018 Douglas Karr
Ukuqala kwam ukuva igama elithi Ukuthengisa ngokusekwe kwiAkhawunti kwiminyaka embalwa eyadlulayo, ndagcuma. Logama nje bendisebenza kwiinkampani eziphakathi nezikhulu, sinabameli bokuthengisa abaphambili abaphanda, bajolise kubo, kwaye bavala iiakhawunti ezinkulu. I-ABM ayisiyo nje i-buzzword, nangona kunjalo. I-ABM ikhule yinkqubo eqinisekisiweyo, elungiswe kakuhle ngezixhobo ezithile ezimnandi zokunceda ekuchongeni amathuba nasekuwalandeleleni ukuya esiphelweni. I-ABM iyaqhubeka nokunyuka ngokuthandwa kunye nokwamkelwa